Devanagari Newsअन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन — Devanagari News
विराटनगर, २९ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आगामी १४औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा अन्योल बढेको छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार ७ देखि १० फागुनका लागि तोकिएको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै कोरोनाका कारण प्रभावित भएपछि महाधिवेशन कहिले हुने भन्नेमा कांग्रेस आफैं अन्योलमा छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय महाधिवेशनबारे के गर्ने भन्ने केही छलफल नै नभएको बताए । ‘अहिले त केही कुरा भएको छैन र यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन, मिटिङ स्थगित भएको छ, पछि छलफल होला,’ महतले भने ।
कांग्रेसले केन्द्रबाहेकका तल्ला तहका अधिवेशनको मिति कार्यतालिका प्रभावित भएपछि यसअघि नै दुई पटक सारेको थियो । यस पटक समेत केन्द्रीय समिति बैठकबाट कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशनसहित सबै अधिवेशन सार्ने तयारी गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ
कांग्रेस वडा अधिवेशन : म्याग्दीका ४५ मध्ये ४१ वडामा सर्वसम्मत
कांग्रेसमा लेबी नबुझाउनेले महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने !
कांग्रेसको ५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण वेवसाइटमा
कांग्रेसको अग्निपरीक्षा !